Izay miova no afa-manova… fiainam-bahoaka | NewsMada
Izay miova no afa-manova… fiainam-bahoaka
Malaza izao ny praiminisitra sy ny governemantan’ny marimaritra iraisana. Manao tsy omby aloha amin’izany ny resaka, ny tombantombana, ny adihevitra, ny ankisisika, ny fifanosehana aza… Hoe ho an’ny fanovana tsinona?
Amin’izany, efa tsy hita be ihany izay hoe fanovana: fitadiavana sy fiadiana seza? Sarotra sy manahirana ny raharaham-pirenena amin’izao: tena fitiavan-tanindrazana ny fifandrobahana sy ny fifanosehana hiantsoroka andraikitra?
Amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka, ohatra: mba misy ve ny hazakazaka sy fanaovana ankisisika ary kajikajy toy izany? Tsy inona fa amin’ny fandraisana andraikitra amin’izay zava-tsarotra sy manahirana…
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fisian’ny asa, fandrobana tany noho ny kolikoly, fanamparam-pahefana, fanjakan’ny tsimatimanota… Izany no manahirana ny vahoaka ifotony isan’andro vaky.
Mba iza, hono, no efa nihazakazaka sy nanao ankisisika ary kajikajy amin’ny fandraisana andraikitra amin’izany? Eny, na amin’ny tondra-drano sy rivodoza aza, ohatra: misy antony sy kajikajy hafa matoa mampihazakazaka…
Koa inona àry no mampihazakazaka amin’ny hoe fandraisana andraikitra amin’izao toe-draharaham-pirenena sarotra sy manahirana izao? Misy antony ao, manetsika sy manesika. Tsy zazabodo na bado ny vahoaka.
Raha mba izay zava-tsarotra sy manahirana ny vahoaka ifotony isan’andro vaky, hono, no mampihazakazaka, anaovana ankisisika sy kajikajy? Na andraisana andraikitra… Tsy mbola hita aloha izay hoe fanovana amin’izao.
Mbola eo am-pitolomana tokoa, angaha, na eo am-piadiana varotra? Ho hita eo… Ny miova no afa-manova, ny madio no afa-manadio… Be ny mila fanovana eto, samy miady ny ho azy amin’izany, ohatra, ny sendikà isanisany.
Fampianarana, fahasalamana, fananan-tany, fadintseranana, fitsarana, fitantanam-bola…Samy itakiana fanovana avokoa izany amin’izao. Mba tena hitondrana fanovana tanteraka eo amin’ny fiainan’ny vahoaka ifotony amin’izay?